Ny alakamisy 20 febroary teo hatramin’ny talata 25 febroary dia nanaovana fisafoana manokana ny tao Analambozaka sy Andranomamy ary tao Tanambao. Vokany, olona 18 no voasambotra ka ny 13 tamin’ireo dia tsy nahitana kara-panondro nefa mandeha alina. Ny 3 nosamborina noho ny fahamamoana an-dalambe ary ny 2 farany dia voasambotra teo am-pamakiana tranon’olona. Ny 1 tamin’ireo mpamaky trano ireo dia tra-tehaka ny alakamisy 20 febroary, ary ilay faharoa kosa tamin’ny alatsinainy 24 febroary. Taorian’ny fanadihadiana mahakasika ireo voasambotra rehetra dia nalefa nody ny 16 fa ireo mpamaky trano 2 lahy kosa dia naiditra am-ponja vonjimaika.